I-yunivesithi yaseFranham: i-GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO we-Scores
I-Fordham GPA, iSAT kunye ne-ACT Graph
I-Fordham Yunivesithi ye-GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO Ukwazisa ukuba kwamkelwe. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
Ulinganisa njani kwiYunivesithi yaseFranhamham?
Ingxoxo yee-Fordham's Admissions Standards:
I-Fordham iYunivesithi ikhethekileyo iJusuit, iyunivesithi yamaKatolika e-Bronx eNew York City. Ngaphantsi kwesiqingatha sabo bonke abafake izicelo kwiYunivesithi yaseFranham baza kuvunywa. Abafakizicelo abaphumelelayo banamathuba amanqaku avavanyo kunye namazinga aphakamileyo aphakamileyo aphezulu ngaphezu komlinganiselo. Kwigrafu ngasentla, amachashaza ahlaza okwesibhakabhaka kunye aluhlaza amelela abafundi abamkelekileyo. Uyabona ukuba uninzi lwabafakizicelo abaphumeleleyo banamaGPA aphakamileyo esikolweni "A-" okanye ngaphezulu, ama-SAT amanqaku angama-1200 okanye ngaphezulu (RW + M), kunye ne-ACT amanqaku angama-25 okanye angcono. Amathuba afanelekileyo kubafundi abane-"A" kunye nemilinganiselo ye-SAT ye-1300 okanye ngaphezulu.
Phakathi kwegrafu, uya kuqaphela amanqaku ambalwa ebomvu (abafundi abachasiweyo) kunye namachashaza aphuzi (abafundi abadibeneyo) baxutywe kunye nohlaza kunye nohlaza okwesibhakabhaka. Abafundi abaninzi abanamabanga kunye neemvavanyo zokuvavanya ezijoliswe kwiYunivesithi yaseFranham abazange bangene. Kwiflip side, phawula ukuba abafundi abambalwa bamkelwe ngamanqaku okuvavanya kunye namanqaku ambalwa ngaphantsi kwesiqhelo. Oku kungenxa yokuba inkqubo ye-Fordham yokwamkelwa isekelwe kwiinkcukacha ezingaphezulu kweenkcukacha. Iyunivesithi isebenzisa isicelo esiqhelekileyo kwaye inenkqubo yokwamkelwa epheleleyo . Abantu baseFranham bayamkela ukufumana ukuba uthathe iikhosi eziphakamileyo zezikolo , kungekhona iiklasi ezazilula "A." Kwakhona, baya kukhangela inqaku eliwineleyo , imisebenzi enomdla yenkcazo , kunye neencwadi ezinamandla zinconywa . Ekugqibeleni, nangona iForhamham ayifuni iimvavanyo zezifundo ze-SAT, ziya kuthathelwa ingqalelo nayiphi na amanqaku afake isicelo.
I-Fordham inikezela ngeendlela zokwamkelwa kweeNkcazo zokuQala kunye neNkqubo yokuQala . Ukuba iyunivesithi ngokuqinisekileyo isikolo sakho esikhethwa kuqala, uya kuthumela isigidimi esinamandla malunga nomdla wakho ukuba ukhetha isigqibo sokuqala kuba lukhetho olubophelelayo. Isigqibo sokuqala yindlela ecacileyo yokubonisa umdla wakho kunye nokuphucula amathuba okungena.
Ukuze ufunde kabanzi malunga neYunivesithi yaseFranham, i-GPA ezikolweni eziphakamileyo, izikolo ze-SAT kunye nama-ACT, amanqaku angancedisa:
Iphrofayili ye-Admissions ye-Universityham
Ukuba uthanda iYunivesithi yaseForhamham, Unako ukufana nalezi zikolo:
Ikholeji yaseBarnard: Iprofayili | I-GPA-SAT-ACT IGrafu
Amanqaku afana neYordan University:
Inkomfa ye-Atlantic 10
I-French ithi 'Par Exemple'; Sithi, 'Ngomzekelo.' Ahluke Kangako!